Xasarado ka aloosan Soomaali galbeed | KEYDMEDIA ONLINE
Xasarado ka aloosan Soomaali galbeed
Dilal loo sababeeyay aanooyin qabiil u dhaxeeya Maleeshiiyaad ka kala tirsan qabiilo walaalo ah oo wada dega Gobolka Gorraxay, ayaa laga soo sheegayaa degaanka Soomaalida Itoobiya.
JIGJIGA, Soomaali galbeed - Wararka ka imaanaya qaar ka mid ah gobollada dhaca degaanka Soomaali galbeed, ayaa warinaya in maalmihii la soo dhaafay ay siyaadeen isku dhacyada beelo waalo ah oo wada dega degaanka, kuwaas oo isku maandhaaday dhul daaqsimeed iyo muranno ka dhashay gabdho la kala guursaday.
Degaanka Caleen oo hoos taga degmada Shilaabo, ayaa la sheegaya in lagu dilay labo Wiil oo wada dhalatay, da’doodana lagu sheegay 16 iyo 14, sidoo kale degaan lagu magacaabo Hararaf oo hoos taga degmada La-helow, ayaa sheegaya in lagu dhaawacay wiil dhalin yaro ah, kadib muran ka dhashay guur la isku fahmi waayay.
Dhanka kale, Maleeshiyaad Oromo ah oo la rumeysan yahay in ay ka yimaadeen degmada Jinacsani, ayaa weerar ku soo qaaday degaanka Tuli-Guuleed oo qiyaastii 30KM u jirta magaalada Jigjiga, waxaana duullaanka Maleeshiyadka Oramada ee boobka u socday iska difaacay dadka degaanka.
Inta la xaqiijiyay afar ruux oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaal in muddo ah ka socday magaalada ku taal bariga Ethiopia, halka intaas in ka bandanna ku dhaawacmeen.